Daynta Cafinta Somaliya fari kama qodna – Idil News
April 2, 2020 | Hogaankii Nabadgelyada Ee DDSI oo xilkii laga qaaday
April 2, 2020 | Bandowgii Gobolada Puntland oo habeenkii labaad galay
Daynta Cafinta Somaliya fari kama qodna
Posted By: Jibril Qoobey February 15, 2020
Deyn Cafintu fari kama qodna ( Wax ka ogow marxaladaha la soo maray iyo go’aankii shalay ee IMF)
Shabakada Jowhar.com ayaa dabagal ku sameysay hannaanka deyn cafinta Soomaaliya iyo heerarka ay soo martay, laga soo bilaabo sanadkii 2011, waxaa xogo kala duwan ka uruurinay dhaqaalayahano si dhow ula socday Nidaamka deyn cafinta iyo marxaladihii uu soo maray.
1- Ambaqaadid Xiriirka IMF iyo World Bank.
2- Kormeerka IMF oo 6 bilood looga gudbi karo.
3- U qalmid Deyn cafin oo la yiraahdo Decision Point oo qaadan kara ugu yaraan 3 sanno illaa iyo 16 sanadood.
4- Deyn cafin kama dambeys ah oo loo yaqaanno Completion Point.
1- Ambaqaadid Xiriirka IMF iyo Word Bank (Reengagement). Arrintaan waxaa billaabay dowladdii uu hoggaaminayay Sheekh Shariif. Shuruudaha ku xirnaa in ay samayso waxaa ka mid ahaa in Dastuurka la ansixiyo, ku meel gaarkana laga baxo.
2-Waxaa xigay in dowladdii Xasan Sheekh ay ambaqaadday xiriirkii. Waxay ka gudubtay samaynta shaqaalaha rayidka, bankiga dhexe howlgalintiisa, abuurka golaha maaliyadda FGC, kaddibna waxay bilowday barnaamijkii ugu horeeyay ee kormeerka IMF ee SMP 1. Dowladdii Xasan Sheekh waxay ku dhacday in ay SMP 1 guul ka gaarto.
4- SMP 1 waxaa loogu tala galay in looga gudbo keliya muddo 6 bilood ah go’aanka shalay soo baxay oo ahaa Decision Point. Hase ahaatee is bedeladii iyo sharciyadii loo baahnaa sida kan maamulka maaliyada, sharciga shirkadaha, midka la dagaalanka wax is daba marinta intaba lama sameyn.
5- Dowladda madaxweyne Farmaajo waxay ka gudubtay SMP 4, balse waxay ku dhacday SMP 2, waa loo kordhiyay SMP 3, kaddib kordhintii dambe ayay kaga gudubtay 13 ka mid ah shuruudihii, ayagoo weli ay 4 kale u dhiman tahay.
Decision Point oo la filayo March waa bilowga deyn cafinta, wuxuuna socom doonnaa muddo 3 sanno ah.